Vaovao momba ny fizahan-tany any Afrika • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Other • Olona manao vaovao • Vaovao momba ny dia any Seychelles • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Travel Wire News • Vaovao mivalona
Fikarohana mahaliana an'i Seychelles Marine Scientist
ameer mitazona ny iray amin'ireo mpandray akustika izay vao avy naka antsitrika izy
Home » Lahatsoratra » Ny olona ao amin'ny Travel & fizahan-tany » Fikarohana mahaliana an'i Seychelles Marine Scientist
Mpahay siansa an-dranomasina Seychelles, Ameer Ebrahim, vao tsy ela akory izay namoaka ny fikarohana nataony tao amin'ny Journal of Fish Biology, tahiry fikarohana manerantany. Ity famoahana ity dia manaraka ny efa-taona any an-tsaha, toerana izay nokendren'i Ebrahim karazan-trondro ahitra, toy ny parrotfish sy bitro, ary nandinika izay mety ho anjara asan'ireto karazana ireto amin'ny fiaretan'ny haran-dranomasina.
Ny fikarohana nataony dia nandinika manokana ny maodelin'ny fihetsiky ny tongotra hazondamosin-tongotra (Siganus sutor), fantatra eo an-toerana amin'ny hoe 'kordoyen blan'. Ity karazana ity dia manan-danja tokoa amin'ny varotra manerana ny faritra amin'ny Ranomasimbe Indianina Andrefana. Ao Seychelles, izy ireo dia ahitana ny ankamaroan'ny haza an-taonan'ny artisanaly ary manjary manjono mihoampampana.
Ebrahim, eo ambany fanaraha-mason'ny Dr. Jude Bijoux, mpahay siansa an-dranomasina Seychellois iray hafa, dia nanao fanadihadiana be dia be tamin'ny fampiasana ny metodôlôjia miavaka tokoa, dia ny teknolojia telemetera akustika, manodidina ny nosy Denis. Ny ekipa dia nametraka tag anatiny tao anaty bitro maro ary nandinika ny fihetsik'izy ireo nandritra ny enim-bolana mahery.
Ny angon-drakitra dia nanambara ny fifandraisana misy eo amin'ireo toeram-ponenana tambajotra, izay tokony hanampy ny manam-pahefana mifandraika amin'ny ezaka ataon'izy ireo amin'ny fitantanana amin'ny fomba mahomby ireo faritra arovana an-dranomasina. Naneho ny faniriany i Ebrahim fa ny governemanta dia mihevitra ny mampiditra ahidrano ahidrano, izay tsy raharahiahy amin'izao fotoana izao, amin'ny adihevitra momba ny fitantanana.
ameer retrieving one of the receivers from ny ahidrano
Manana taratasy hafa izy izay eo am-pandinihana iraisam-pirenena ankehitriny ary mety havoaka ao anatin'ny volana vitsivitsy.
ameer amin'ny alàlan'ny fandidiana ny fametahana ny tag akustika ho santionany
Ebrahim dia naneho ny fankasitrahany an'i Denis Private Island any Seychelles noho ny fandraisam-bahiny sy ny fanohanan'izy ireo, ary ny Seychelles Fishing Authority (SFA) tamin'ny fanamorana ny fikarohana nataony.
Antenaina fa ny SFA, izay manana antontam-panangonana tsy voarindra am-polotaona am-polony taona maro, dia hanomboka hamoaka sy hizara ny zavatra hitany amin'ny besinimaro ihany koa.
The Birao fizahantany afrikanina Niarahaba ny filoha Alain St.Ange